လန်ဒန်ရှိ Virtual ရုံး
တတ်နိုင် Virtual ရုံး in လန်ဒန် သင့်ရဲ့အဘို့ virtual ရုံးလိပ်စာ လန်ဒန်မှာ, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ကို virtual လိပ်စာ လန်ဒန်မှာ, virtual ရုံးခန်း လန်ဒန်မှာ, အွန်လိုင်းရုံး လန်ဒန်မှာ, virtual စီးပွားရေးလိပ်စာ လန်ဒန်မှာလန်ဒန်မှာ virtual office ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးတယ် ကို virtual ရုံးဝန်ဆောင်မှုပေး ဗြိတိန်၌တည်၏။
Virtual ရုံး ယူကေတွင် Virtual ရုံးလိပ်စာ ယူကေတွင် စီးပွားရေးအတွက်စကားဝှက်လိပ်စာ ယူကေတွင် Virtual ရုံးခန်း ယူကေတွင် အွန်လိုင်း Virtual ရုံး ယူကေတွင် virtual စီးပွားရေးလိပ်စာ ယူကေတွင် Virtual Workspace ဗြိတိန်၌တည်၏။
လျင်မြန်စွာပြောင်းလဲနေသောနည်းပညာလောကတွင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတည်နေရာတစ်ခုရှိရန်လိုအပ်သည်။ ဤပြောင်းလဲမှု၏အကြီးမားဆုံးအားသာချက်တစ်ခုမှာ virtual office သည်ငှားရမ်းခတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်သို့မဟုတ်နေရာတစ်ခုတွင်ငှားရမ်းရန်မလိုခြင်းဖြစ်သည်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတည်နေရာကိုဖယ်ရှားလိုသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ရွေးချယ်နိုင်သောနည်းလမ်းတစ်ခုမှာ virtual office ဖြစ်သည်။ virtual office အတွက်အကျိုးကျေးဇူးတွေအများကြီးရှိတယ်။ London သည် virtual office တစ်ခုကိုတည်ဆောက်ရန်အကောင်းဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ မြို့တော်သည်လျင်မြန်စွာကြီးထွားလာနေပြီးစီးပွားဖြစ်၊ အသိဥာဏ်နှင့်လူမှုရေးအရအရောင်အသွေးများ၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုအသုံးချနိုင်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်ပထ ၀ ီအနေအထားကောင်းမွန်သည်။
လန်ဒန်သည်အင်္ဂလန်နှင့်ယူကေနိုင်ငံ၏အကြီးဆုံးနှင့်မြို့တော်ဖြစ်သည်။ အင်္ဂလန်၏အရှေ့တောင်ဘက်ရှိမြောက်ဘက်ပင်လယ်မှ ဦး ဆောင်သော ၈၀ ကီလိုမီတာရှိသောမြစ်ဝတွင်တည်ရှိပြီးအံ့ဖွယ်သောမြစ်မြစ်ပေါ်၌တည်ရှိပြီးလန်ဒန်သည်ထောင်စုနှစ်နှစ်ခုအတွက်ကြီးမားသောအခြေချနေထိုင်မှုဖြစ်ခဲ့သည်။ လန်ဒန်ကိုရောမတို့ကတည်ထောင်ခဲ့သည်
Virtual office provider များတွင်အီးမေးလ်၊ cloud သိုလှောင်ခြင်း၊ web hosting နှင့်အခြား web-based application များကဲ့သို့သောဒီဂျစ်တယ်အရင်းအနှီးများပါ ၀ င်နိုင်သည်။ လန်ဒန်၌သင်၏ရုံးခန်းဖွင့်ခြင်းသည်ရိုးရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုံးထက်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစွာသက်သာလိမ့်မည်။ များစွာသောလူများက virtual office ကိုရွေးချယ်ရခြင်း၏အရေးကြီးဆုံးအကြောင်းအရင်းမှာ၊ သင်သည်ကြီးမားသောငှားရမ်းခများကိုမပေးဘဲကောင်းသောစီးပွားရေးလိပ်စာကိုပေးဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်။
သင်၏လန်ဒန်ရှိသင်၏ရုံးခွဲသည်ပိုမိုကြီးမားသောရုံးခန်းသို့ပြောင်းစရာမလိုဘဲသင်၏လုပ်ငန်းကိုချဲ့ထွင်ရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ ဤသည်မှာရိုးရာတိုးချဲ့မှုအတွက်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာပြီးစိတ်ဖိစီးမှုကင်းသည့်အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိအရည်အချင်းများကို ၀ င်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်၊ ဤနေရာတွင်အရေးကြီးဆုံးအချက်အနေဖြင့်သင်သည်မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုရွေ့လျားခြင်းမရှိဘဲ package များနှင့်အီးမေးလ်များကိုလက်ခံရရှိနိုင်ပြီး၎င်းသည် Virtual ရုံးများ၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်သည်။ Virtual Office တစ်ခုတည်ထောင်ခြင်းသည်အဝေးမှအလုပ်လုပ်လိုသူများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ Virtual Office သည်သင့်အားနေရာတိုင်း၊ ပန်းခြံ၊ အိမ်၊ ကမ်းခြေ၊ သင်လိုချင်သည့်နေရာမှအလုပ်လုပ်ရန်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပေးသည်။
လန်ဒန်ရှိ virtual စီးပွားရေးလိပ်စာကဘာလဲ။
တစ်ဦးရှိခြင်းသည် လန်ဒန်ရှိ virtual ရုံး လန်ဒန်ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ကမ္ဘာကြီးအားအကောင်းဆုံးဖြစ်စေရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ လန်ဒန်ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလိပ်စာဟုလည်းလူသိများသောလန်ဒန်ရှိ virtual ရုံးသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအားငှားရမ်းခြင်းတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်သို့မဟုတ်တည်နေရာအတွက်စျေးကြီးသောငှားရမ်းခမပေးရန်အခွင့်အလမ်းပေးသည်။ လန်ဒန်ရှိ Virtual Office သည်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာပြီးလန်ဒန်ရှိသင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပေးသည်။ ထို့အပြင်လန်ဒန်ရှိရိုးရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုံးထက် virtual office London သည်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များစွာသည်လန်ဒန်ရှိနာမည်ကြီးစီးပွားရေးလိပ်စာတစ်ခုအတွက်သင်ပေးဆောင်ရမည့်ကြီးမားသောငှားရမ်းခကိုမပေးဘဲသင်ခန်းစာယူထားသည့်ဗြိတိန်နိုင်ငံ၏ရုံးခန်းတစ်ခုကိုရွေးချယ်ကြသည်။ လန်ဒန်၏ Virtual ရုံးသည်စီးပွားရေးကုန်ကျစရိတ်များကိုအနိမ့်ကျသက်သာစေနိုင်သည်။ Virtual ရုံးနေရာကိုလန်ဒန်ရှိ virtual office အဖြစ်ယူခြင်းအားဖြင့်သင်သည်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုလန်ဒန်ရှိရုံးခန်းကြီးတစ်ခုသို့ပြောင်းစရာမလိုဘဲချဲ့ထွင်နိုင်လိမ့်မည်။ London Virtual ရုံးသည်လန်ဒန်ရှိရိုးရာစီးပွားရေးတိုးချဲ့မှုနှင့်ကုန်ကျစရိတ်နည်းသောအခြားရွေးချယ်စရာရုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။
သင်ကုန်ထုတ်စွမ်းအားတိုးလာလိမ့်မည်ဟုသေချာစေနိုင်ပါတယ်။ ထို့အပြင်၊ လန်ဒန်ရှိ virtual ရုံးလိပ်စာရှိခြင်း၏အရေးကြီးဆုံးအချက်မှာသင်သည်လန်ဒန်ရှိရုံးခန်းသို့မဟုတ်လန်ဒန်ရှိ Workspace တွင်ရရှိခဲ့သည့်အတိုင်းသင်ရရှိနိုင်သည်၊ လန်ဒန်ရှိ workspace သို့မဟုတ် London ရှိရုံးခန်းသည်သင်၏ package များကိုလက်ခံရရှိသည်။ လန်ဒန်ရှိစာတိုက်မေးလ်များ၊ ဘယ်နေရာကိုမှပြောင်းရွှေ့စရာမလိုဘဲ၊ ဗြိတိန်အတွက်သင်၏အွန်လိုင်းရုံးနှင့်လန်ဒန်ရှိလူများစွာသည် virtual office လိုအပ်သည်။ လန်ဒန်တွင် virtual ရုံးတစ်ခုဖွင့်လှစ်ခြင်းသည်အဝေးမှအလုပ်လုပ်လိုသူများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ London virtual office သည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိမည်သည့်နေရာမှမဆိုသင်အလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်းကိုပေးသည်။
London ရှိ Virtual Offices များသည်သင့်အားအပိုအားသာချက်များအနည်းငယ်ပေးသည်။
London ရှိသင်၏ Virtual Office Address သည်အကျိုးရှိသောနေရာတွင်တည်ရှိပြီးဖောက်သည်များအားရေရှည်စွဲမှတ်သွားစေနိုင်သည်။
သင်သည်ကြီးမားသောကုန်ကျစရိတ်များနှင့်စာရွက်စာတမ်းများမရှိဘဲလန်ဒန်ရှိ virtual စီးပွားရေးလိပ်စာကိုသင်၏စီးပွားရေးအခြေစိုက်စခန်းအသစ်လုပ်နိုင်သည်။
သင်၏ Virtual Office ၏အဓိကအကျိုးကျေးဇူးများ လန်ဒန်မှာ
London ရှိ Package များကိုလက်ခံရရှိပါ
လန်ဒန်အတွက် Cloud Storage
Virtual Office အတွက် London, Package
လန်ဒန်မြို့ရှိပစ္စည်း ၂၀ ကျော်အတွက်အခကြေးငွေမရှိပါ
လန်ဒန်တွင်စာအိတ် ၁၀ စောင်အတွက်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးရန်မလိုပါ
လန်ဒန်မြို့ရှိစာတိုက်မေးလ်သိုလှောင်ခန်းကိုရက် ၂၀ အထိအခမဲ့ဖြစ်သည်
UK ရှိ Virtual ရုံးနေရာအတွက်သင်၏ Virtual ရုံးတည်နေရာ
London ရှိ Virtual Office အကြောင်းသင်သိထားသင့်သမျှ
Virtual ရုံးအတွက်အသုံးပြုခပိုယူသည် လန်ဒန်မှာ
သင့်ရဲ့ Virtual Office အတွက်နောက်ဆုံးပေါ်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုစျေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ရယူသုံးပါ
London ရှိ Virtual Business Address နှင့်အခြားတည်နေရာများ -
ရယူ လန်ဒန်ရှိ virtual ရုံးအပေါငျးတို့သမရှိမဖြစ်သာယာအဆင်ပြေမှုများ စျေးသက်သာစျေးနှုန်းမှာ
ကန့်သတ် ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့အတွက် virtual ရုံးအသုံးပြုမှုအပေါ်။
ဗြိတိန်နိုင်ငံ၊ လန်ဒန်မြို့အတွက် Virtual ရုံး ၀ န်ဆောင်မှုသည်အောက်ဖော်ပြပါလူပုဂ္ဂိုလ်များ (သို့) ဗြိတိန်နိုင်ငံရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသို့လန်ဒန်ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ရုံးခန်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုထောက်ပံ့ခြင်းသို့မဟုတ်ထောက်ပံ့ခြင်းမပြုပါ။
ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်၊ ဗြိတိန်အတွက်ရုံးခန်းများအောက်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုကုန်သည်များ၊ ဖြန့်ဖြူးသူများသို့မဟုတ်လက်နက်များ၊ လက်နက်များ၊ ခဲယမ်းမီးကျောက်များ၊
ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်၊ ဗြိတိန်အတွက် virtual office ၀ န်ဆောင်မှုများသည်နည်းပညာဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်းသို့မဟုတ်ပစ္စည်းခိုးယူခြင်းသို့မဟုတ်ဗြိတိန်မှသို့မဟုတ်သို့သွားသောစက်မှုလုပ်ငန်းသူလျှိုများအတွက်ထောက်ပံ့ပေးခြင်းမရှိပါ။
ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်၊ ဗြိတိန်နိုင်ငံရှိ virtual address ဝန်ဆောင်မှုအောက်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုယူကေဥပဒေအရအနက်ရောင်စာရင်းဝင်သည့်တရားမဝင်သို့မဟုတ်ရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး တစ်ယောက်အားထောက်ပံ့ခြင်းမရှိပါ။
ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့၊ ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့ရှိရုံးရုံးလိပ်စာအောက်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုဗြိတိန်မှသို့မဟုတ်ဗြိတိန်သို့ဖြစ်စေ၊
လန်ဒန်၊ ဗြိတိန်အတွက်ဒစ်ဂျစ်တယ် Workspace ၀ န်ဆောင်မှုများအောက်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်အန္တရာယ်ရှိသောသို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှိသောဇီဝဗေဒ၊ ဓာတုပစ္စည်းများသို့မဟုတ်လန်ဒန်ရှိဒစ်ဂျစ်တယ်လုပ်ငန်းခွင်ဖြေရှင်းမှုအောက်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများမှတစ် ဦး ချင်းသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ပေးအပ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ မည်သည့်ထိုကဲ့သို့သောပစ္စည်း (များ) ကိုထုတ်လုပ်, ကိုင်တွယ်သို့မဟုတ်ဖယ်ရှားရှင်းလင်းရေးအတွက်အသုံးပြုစက်ယန္တရားသို့မဟုတ်ပစ္စည်းကိရိယာများအပါအဝင်နျူကလီးယားပစ္စည်း, ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းဗြိတိန်။
လန်ဒန်၊ ဗြိတိန်နိုင်ငံရှိ virtual po box ဝန်ဆောင်မှုအောက်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်လူနှင့်တိရစ္ဆာန်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများကုန်သွယ်ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ တိရိစ္ဆာန်များအလွဲသုံးစားမှုသို့မဟုတ်မည်သည့်သိပ္ပံနည်းကျသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်စမ်းသပ်မှုအတွက်မဆိုဗြိတိန်ရှိသို့မဟုတ်သို့မဟုတ်ဗြိတိန်သို့ပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့ရှိ virtual mailing address service အောက်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်မွေးစားမိဘများလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသို့မဟုတ်ဗြိတိန်နိုင်ငံမှသို့မဟုတ်ဗြိတိန်သို့ဖြစ်စေ၊ သို့ဖြစ်စေလူ့အခွင့်အရေးအလွဲသုံးစားမှုပုံစံများအပါအ ၀ င်မွေးစားခြင်းအေဂျင်စီများအတွက်ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့ရှိဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့ရှိရုံးခန်းငှားရမ်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများအောက်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ဘာသာရေးကိုးကွယ်မှုနှင့်ဗြိတိန်မှသို့မဟုတ်ဗြိတိန်သို့၎င်း၊
ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်၊ ဗြိတိန်နိုင်ငံရှိရုံးခန်းများနှင့်စီးပွားရေးလိပ်စာများအောက်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများနှင့်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုလုပ်ကိုင်သောတစ် ဦး ချင်းပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
London, UK အတွက် virtual virtual service service အောက်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုများသည် Pyramid အရောင်းတွင်လုပ်ကိုင်နေသောဗြိတိန်ရှိသို့မဟုတ်သို့မှသာဗြိတိန်သို့ဖြစ်စေ၊
ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်၊ ဗြိတိန်ရှိရုံးခန်းငှားရမ်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများအရမူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်သည့်ဗြိတိန်ရှိသို့မဟုတ်သို့မဟုတ်ဗြိတိန်နိုင်ငံရှိကုမ္ပဏီများအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်းမရှိပါ။
တတ်နိုင်သောစျေးနှုန်းဖြင့်ယနေ့ UK ၌သင်၏ virtual office ကိုရယူပါ။
virtual address ကိုအသုံးပြုခြင်းအပေါ်အရေးကြီးသောမှတ်စု လန်ဒန်မှာ
virtual ရုံးမှန်ဆောင်မှုများ လန်ဒန်မှာ
ကျနော်တို့စျေးသက်သာ ကို virtual ရုံးန်ဆောင်မှုများ in လန်ဒန်အဖြစ်ကိုလည်းသိ ကို virtual စာတိုက်ပုံးန်ဆောင်မှုများ လန်ဒန်မှာ, virtual လိပ်စာဝန်ဆောင်မှု လန်ဒန်မှာ, virtual ရုံးကုမ္ပဏီ လန်ဒန်, စာပို့ဝန်ဆောင်မှု လန်ဒန်မှာ, ကို virtual ရုံးလိပ်စာဝန်ဆောင်မှု လန်ဒန်မှာ, ဒီဂျစ်တယ် Workspace န်ဆောင်မှု လန်ဒန်မှာ, စာတိုက်လိပ်စာဝန်ဆောင်မှု လန်ဒန်မှာ, virtual ရုံးကုမ္ပဏီများသည် လန်ဒန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ် ဒီဂျစ်တယ် workspace ဖြေရှင်းချက် လန်ဒန်, ကို virtual po box ကိုဝန်ဆောင်မှု လန်ဒန်, ကို virtual mailing address ကိုဝန်ဆောင်မှု လန်ဒန်, virtual ရုံးငှားရမ်းန်ဆောင်မှု လန်ဒန်, ကို virtual ရုံးခန်းငှားရမ်းန်ဆောင်မှု လန်ဒန်၊ ဒီဟာငါတို့ရဲ့အစိတ်အပိုင်းပဲ ကို virtual ရုံးန်ဆောင်မှုများ in UK, တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း, ကို virtual စာတိုက်ပုံးန်ဆောင်မှုများ ယူကေမှာ virtual လိပ်စာဝန်ဆောင်မှု ယူကေမှာ ကို virtual ရုံးလိပ်စာဝန်ဆောင်မှု ယူကေမှာ စာပို့ဝန်ဆောင်မှု ယူကေမှာ ဒီဂျစ်တယ် Workspace န်ဆောင်မှု ဗြိတိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ် ဒီဂျစ်တယ် workspace ဖြေရှင်းချက် ယူကေမှာ စာတိုက်လိပ်စာဝန်ဆောင်မှု ယူကေမှာ ကို virtual PO box ကိုဝန်ဆောင်မှု ယူကေမှာ ကို virtual mailing address ကိုဝန်ဆောင်မှု ယူကေမှာ virtual ရုံးကုမ္ပဏီ ယူကေမှာ virtual ရုံးငှားရမ်းန်ဆောင်မှု ယူကေမှာ virtual ရုံးကုမ္ပဏီများသည် ယူကေမှာ ကို virtual ရုံးခန်းငှားရမ်းန်ဆောင်မှု ယူကေမှာ။ အဖြစ် ကို virtual ရုံးဝန်ဆောင်မှုပေး လန်ဒန်မှာ။
Virtual ရုံး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူ ယူကေတွင် Virtual ရုံး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူ လန်ဒန်မှာ
ပို၍ ထူးခြားသည် လန်ဒန်မြို့ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြေရှင်းချက်
လန်ဒန်ရှိသင်၏စီးပွားရေးတိုးချဲ့မှုအတွက်လန်ဒန်ဈေးကွက်သို့ ၀ င်ရောက်ခြင်းသည်အောင်မြင်မှုအတွက်သော့ချက်ဖြစ်သည်။ လန်ဒန်၏စျေးကွက်သို့ရောက်ရှိရန်အထိရောက်ဆုံးနည်းမှာကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီလန်ဒန်ရှိအခွန်နှုန်းထားများကိုအခွင့်ကောင်းယူရန်ဖြစ်သည်။ လန်ဒန်တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်း၊ လန်ဒန်တွင်တင်သွင်းခြင်း / တင်ပို့ခြင်း၊ လန်ဒန်သို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်း၊ လန်ဒန်ရှိအိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်း၊ လန်ဒန်ရှိထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်နှင့်လန်ဒန်ရှိ HR အတိုင်ပင်ခံတို့၏အကူအညီဖြင့်လန်ဒန်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ခြင်း။
NetherLands နှင့် US အပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံတွင်ကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းကုမ္ပဏီ၏အထောက်အပံ့ကိုကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းထားသည်။ ထို့အပြင်တစ် ဦး အဖြစ်လူသိများလန်ဒန်မှာရှိတဲ့ကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းကော်ပိုရေးရှင်း စင်ပေါ်ကုမ္ပဏီ လန်ဒန်မှာသို့မဟုတ်အသက်ကော်ပိုရေးရှင်းလန်ဒန်မြို့တွင်လန်ဒန်တွင်တည်ထောင်ပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာအိုမင်းရင့်ရော်မှုအတွက်“ စင်ပေါ်တင်ခဲ့သည်” ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ (နိုင်ငံတကာအလေ့အကျင့်) ။ စီးပွားရေးမရှိ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုလည်းမရှိပါ။
လန်ဒန်တွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ရန်ပထမခြေလှမ်းသည် ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း လန်ဒန်မှာဖြစ်စဉ်ကိုဖော်ပြတဲ့အသုံးအနှုန်းဖြစ်တယ် သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုမှတ်ပုံတင်ခြင်း လန်ဒန်မှာ။ ပထမ ဦး စွာ ကုမ္ပဏီ၏အမည်ရရှိနိုင်မှု လန်ဒန်မြို့တွင်စစ်ဆေးပြီးကြောင်းစာရွက်စာတမ်းများလိုအပ်သည် သင်၏လုပ်ငန်းကိုစတင်ပါ လန်ဒန်မှာလုပ်ငန်းများ၌နေကြသည်။ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း လန်ဒန်မှာလွယ်ကူတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုပါ။
ပြီးနောက် ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင် လန်ဒန်မှာ, စီးပွားရေးဘဏ်တစ်ခုဖွင့်လှစ်ခြင်း လန်ဒန်မှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ဖွင့်လှစ်တဲ့အခါမှာအရေးကြီးဆုံးအရာတွေထဲကတစ်ခုက။ စီးပွားရေးဘဏ်အကောင့် လန်ဒန်မှာမင်းရဲ့အဓိကအခန်းကဏ္playsကနေပါဝင်တယ် startup စီးပွားရေးလုပ်ငန်း လန်ဒန်မှာသင့်ကိုလန်ဒန်မှာစီးပွားရေးအသုံးစရိတ်တွေကိုခြေရာခံနိုင်အောင်၊ လန်ဒန်မှာအခွန်အစီရင်ခံမှုနဲ့လန်ဒန်မှာရှိတဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့သိုက်ငွေတွေကိုလွယ်ကူချောမွေ့အောင်လုပ်ပေးဖို့။
London မှ Clients တွေအတွက်, သင်ရှာနေလျှင် နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးလုပ်ငန်း လန်ဒန်မှကြီးထွားမှု, ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီ မှတ်ပုံတင် လန်ဒန်အပြင်ဘက်မှာမင်းရဲ့အဖြေကလန်ဒန်အပြင်ဘက်မှာတောင်ပံတွေကိုဖြန့်ဖို့ကူညီနိုင်တယ်။ ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီ မင်းကိုလန်ဒန်မှာလွတ်လပ်ခွင့်ပေးတယ် သင်၏နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးကိုစတင်ပါ လန်ဒန်ကနေ။
ဖွင့်လှစ် ကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့် လန်ဒန်ကနေ
သငျသညျရောက်နေတယ်ဆိုရင် သင်၏ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုစလုပ်ပါ လန်ဒန်မှာရှာဖွေနေကြသည် ကမ်းလွန်ဘဏ်၎င်းကိုဖွင့်ရန်လွယ်ကူသည် ကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့် လန်ဒန်ကနေ။ လန်ဒန်တွင်စာရွက်စာတမ်းများဖြည့်စွက်ခြင်း၊ အထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းများကိုလန်ဒန်မြို့တွင်ဖြည့်တင်းပေးခြင်းနှင့်သင်သည်လန်ဒန်မှတရားမဝင်လုပ်ဆောင်မှုများကိုစီစဉ်နေခြင်းမဟုတ်ကြောင်းပြသရန်လန်ဒန်တွင်နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းဖြစ်သည်။
ကုန်သည်အကောင့် လန်ဒန်နှင့် ငွေပေးချေမှုရမည့် Gateway မှာ လန်ဒန်ကို
eCommerce ငွေပေးချေမှုဖြေရှင်းချက် London အတွက် All-In-One ငွေပေးချေမှုပလက်ဖောင်း လန်ဒန်မြို့ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ငွေပေးချေရန်တံခါးပေါက် နှင့် ကုန်သည်အကောင့် startup business အတွက် London မှာရှုပ်ထွေးနေပုံရတယ်၊ London အတွက်ငွေပေးချေရန်ဂိတ်တံခါး၊ London အတွက်ငွေပေးချေမှုစနစ်နှင့်ကုန်သည်အကောင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသစ် လန်ဒန်မှာ - သင်တစ် ဦး လျှင် eCommerce ကုန်သည် လန်ဒန်မှာ
ကျော်များအတွက်လန်ဒန်ငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက် 170 နိုင်ငံများ
လန်ဒန်ရှိကုန်သည်အကောင့် - ငွေကြေး ၂၀၀ လက်ခံပါ
ငွေပေးချေမှုကိုလက်ခံပါ ထက်ပိုမိုထံမှလန်ဒန်၌ 300 ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများ
ရှိပြီးသားစီးပွားရေးကိုဝယ်ပါ လန်ဒန်က သင်၏ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးကိုစတင်ပါ London.To ၌တည်၏ စီးပွားရေးစတင်ပါ လန်ဒန်ရှိလန်ဒန်ရှိလက်ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ၀ ယ်ယူခြင်းကိုလည်းစဉ်းစားနိုင်သည်။
စီးပွားရေးရောင်းအား လန်ဒန်မှာဖြစ်ဖြစ်လူတစ်ယောက်ဟာလန်ဒန်မှာကုမ္ပဏီရဲ့ရှယ်ယာ ၀ ယ်တာမျိုး၊
သငျ့လျြောသော ကြောင့်လုံ့လဝီရိယ လန်ဒန်မြို့ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုရောင်းချခြင်းမပြုမီပြုလုပ်သင့်သည်။ ပါတီများက ၀ င်ရောက်ခြင်း၏အကျိုးဆက်များကိုသတိပြုရမည် စီးပွားရေးရောင်းချခြင်း လန်ဒန်နှင့်၎င်းနောက်ကွယ်မှဥပဒေရေးရာသက်ရောက်မှုတွေ။
အကောင့်များ Outsourcing လန်ဒန်မှာ
အကောင့်များ outsourcing ထူးခြားသောလိုအပ်ချက်များနှင့်လိုအပ်ချက်များအတွက်လန်ဒန်ရှိကွဲပြားခြားနားသောစက်မှုလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်သည်။ လန်ဒန်ရှိကမ်းလှမ်းမှုများကသင့်အားမှန်ကန်သောဆုံးဖြတ်ချက်များချနိုင်ရန်အတွက်လန်ဒန်ရှိဘဏ္indicatorsာရေးညွှန်းကိန်းများကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်ကူညီလိမ့်မည်။
- စာရင်းကိုင်ဝန်ဆောင်မှု လန်ဒန်မှာ
လန်ဒန်တွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ခြင်းသို့မဟုတ်လန်ဒန်တွင်တည်ထောင်ထားသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်ဖြစ်လျှင်၊ လန်ဒန်မှဘဏ္financialာရေးဆိုင်ရာလိုင်စင်ရယူခြင်းသို့မဟုတ်လန်ဒန်မှဘဏ်လုပ်ငန်းလိုင်စင်အတွက်ကမ်းလွန်လိုင်စင်၊ Crypto လဲလှယ်ခြင်းအတွက်လိုင်စင်နှင့် ICO သို့မဟုတ်တရားစီရင်မှုအမျိုးမျိုးရှိလန်ဒန်မှလောင်းကစားလုပ်ငန်းလိုင်စင်အတွက်လိုအပ်လျှင်လိုအပ်သည်။
Virtual Number (VoIP) လန်ဒန်ကို
VoIP ကမ်းလှမ်းသောဝန်ဆောင်မှုများ ဘို့ နှစ်ခုလုံး စီးပွားရေးလုပ်ငန်း London နှင့် Residial VoIP တို့ဖြစ်သည်။
Virtual နံပါတ် လန်ဒန် 89 နိုင်ငံများ | 290 အမြို့မြို့
သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသည်လန်ဒန်၌ဖြစ်စေ၊ အခြားမည်သည့်နေရာ၌ဖြစ်စေ၊ သင့်လုပ်ငန်းအတွက်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကောင်း လန်ဒန်မှာဖြစ်ဖြစ်၊ မင်းရဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာရှိနေခြင်းကပျောက်နေတယ်
ယူကေရှိစျေးသက်သာသော ၀ က်ဘ်ဆိုက်ဒီဇိုင်း
ကျွန်ုပ်တို့၏ HR ကိုလန်ဒန်ရှိအမှုဆောင်ရှာဖွေရေးတွင်အသုံးပြုပါ London အတွက်ဝန်ဆောင်မှုများ, အခွက်တဆယ်ဝယ်ယူမှု လန်ဒန်မြို့ရှိဝန်ဆောင်မှုများ, စုဆောင်းခြင်းဖြစ်စဉ်ကို outsourcing လန်ဒန်ရှိဝန်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်လန်ဒန်အတွက် jobsite ကိုအခမဲ့သုံးစွဲရန်
လန်ဒန်ရှိလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်အတိုင်ပင်ခံ (HR) ပေါင်းအခမဲ့ယောဘသည် Portal ကို လန်ဒန်အတွက်ဝင်ရောက်ခွင့်
Talent Acquisition လန်ဒန်မှာ
Talent Acquisition သည်အဆင့် ၃ ဆင့်ပါ ၀ င်သောလန်ဒန်ရှိသင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ဘက်စုံဆောင်ရွက်မှုဖြစ်သည်။
- စုဆောင်းသည် လန်ဒန်မြို့ရှိသင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း
- ရွေးချယ်ပါ လန်ဒန်မြို့ရှိသင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း
- ဘော်ဒါတွင် လန်ဒန်၌သင်တို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း၏။
ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက် Talent Acquisition လန်ဒန်မှာလန်ဒန်မှာရာထူးနေရာတွေအများကြီးယူပြီးကျော်လွန်သွားလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်လည်းမဟာဗျူဟာကျကျဆွဲဆောင်ဖို့၊ လန်ဒန်မှာဖြစ်စေ၊ လန်ဒန်မှာဖြစ်စေ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရည်မှန်းချက်များပြည့်မီအောင်ကူညီနိုင်တဲ့နိုင်ငံတကာမှဖြစ်စေ၊
စုဆောင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် Outsourcing လန်ဒန်မှာ (RPO)
ကျနော်တို့ပေး စုဆောင်းမှုဖြစ်စဉ်ကိုပြင်ပ သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုစတင်အောင်မြင်စေရန်လန်ဒန်ရှိဝန်ဆောင်မှုကို။
RPO ပံ့ပိုးပေး လန်ဒန်တွင်လည်းလူသိများသောလန်ဒန်ရှိ Recruiting Process Outsourcing ပံ့ပိုးသူသည်သင်၏ကုမ္ပဏီအတွက်တိုးချဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည် HR လန်ဒန်မှာဘက်စုံငှားရမ်းဖြေရှင်းချက်တစ်ခုပေးသည်။ လန်ဒန်ရှိ RPO ပံ့ပိုးပေးသူသည်လန်ဒန်ရှိလိုအပ်သော ၀ န်ထမ်းများ၊ သင်၏ ၀ န်ထမ်းခေါ်ယူမှုလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်အတွက်လန်ဒန်၌သင်၏အောင်မြင်မှုအတွက်လိုအပ်သောနည်းပညာနှင့်နည်းစနစ်များကိုပေးနိုင်သည်။
(ဒီတစ်ခုအဘို့ဖြစ်၏ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ လန်ဒန်မှာတကယ်ပဲရှာဖွေနေတယ် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အ လန်ဒန်မှာ)
အကယ်၍ သင်သည်လန်ဒန်တွင်အလုပ်အကိုင်နေရာလန်ဒန်ရှိအတွေ့အကြုံ၊ လန်ဒန်ရှိအလုပ်အကိုင်များ၊ လန်ဒန်ရှိအိုင်တီအလုပ်များ၊ လန်ဒန်ရှိအလုပ်အကိုင်နေရာများ၊ လန်ဒန်ရှိလုံခြုံရေးအလုပ်များ၊ လန်ဒန်၊ လန်ဒန်ရှိရာသီအလိုက်အလုပ်သမားများ၊ လန်ဒန်ရှိအလုပ်အကိုင်များ၊ လန်ဒန်ရှိလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များ၊ လန်ဒန်ရှိဝက်ဘ်ဖွံ့ဖြိုးမှုအလုပ်များ၊
ကျွန်ုပ်တို့တွင်လန်ဒန်ရှိအလုပ်ရှာဖွေမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာများရှိသည်။ ၎င်းသည်လန်ဒန်နှင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနေရာ ၁၀၆ ခုတွင်အလုပ်ရှာဖွေရန်အတွက်လျှောက်ထားသူကိုကူညီနိုင်သည်
HR မှအတိုင်ပင်ခံသည်လန်ဒန်တွင်သင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်သောအခါ၊ လန်ဒန်ရှိလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်နှင့်သက်ဆိုင်သောလိုအပ်ချက်များကို တွေ့ဆုံ၍ များစွာကူညီနိုင်သည်။
လူ့အင်အားအရင်းအမြစ် အတိုင်ပင်ခံ ကျွန်ုပ်တို့မှထောက်ပံ့ပေးသော London တွင်သင်၏ HR အခြေခံလိုအပ်ချက်များအတွက်အထူးအလုပ်ဖြစ်သော HR လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်လန်ဒန်တွင်စုဆောင်းမှုကိုချန်လှပ်နိုင်သည်။
အမှန်စင်စစ်အလုပ်အကိုင်များ နှင့်လန်ဒန်အတွက်အရေးပါသောသဘာဝဖြစ်ကြောင်းလန်ဒန်အတွက်နေရာလွတ်, အလျင်အမြန်ငှားရမ်းရန်ကူညီပေးသည်။
- ၁၀၅ နိုင်ငံနှင့်လန်ဒန် - နိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံ။
အကောင်းဆုံး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ HR အလေ့အကျင့် လန်ဒန်မှာရှိတဲ့နောက်သို့လိုက်ကြ၏။
အတူအတွေ့အကြုံကို စက်မှုလုပ်ငန်းအများအပြား လန်ဒန်မှာ။
ထုတ်လုပ်သူသန်းသန်းပေးသည် အလုပ်အမှုဆောင်ရှာဖွေရေး လန်ဒန်ရှိလန်ဒန်ရှိစီမံခန့်ခွဲရေး ၀ န်ထမ်းခေါ်ယူမှုဝန်ဆောင်မှုများအတွက်အကောင်းဆုံးပေးအပ်ရန်ကတိက ၀ တ်ဖြင့်လန်ဒန်ရှိအလုပ်အမှုဆောင်ရှာဖွေရေးနှင့်ဆွေးနွေးခြင်း။
ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်သည် အလုပ်အမှုဆောင်ရှာဖွေရေး လန်ဒန်နှင့်နိုင်ငံတကာမှဒါရိုက်တာမှ“ C” suite level အထိလန်ဒန်တွင်ရှိသည်။ သင်၏လန်ဒန်ကိုသင်၏လျှို့ဝှက်အမှုဆောင်ရှာဖွေမှုကိုအတွေ့အကြုံများစွာရှိသောလန်ဒန်ရှိကျွန်ုပ်တို့၏အကြီးတန်းလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကစစ်ဆေးလိမ့်မည်။
တကယ်ပါပဲအကယ်၍ သင်သည်လန်ဒန်တွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင်ခဲ့လျှင်အောင်မြင်မှုနှင့်တိုးတက်မှုအတွက်လန်ဒန်ရှိလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်လိုအပ်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်အားလန်ဒန်ရှိအလုပ်ရှင်များအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများအခမဲ့ပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်လန်ဒန်ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ HR အတိုင်ပင်ခံ ၀ န်ဆောင်မှုမှတစ်ဆင့်လန်ဒန်ရှိ ၀ န်ထမ်းများကိုငှားရမ်းရန်သင့်အားကူညီနိုင်သည်။ သို့မှသာသင်သည်လန်ဒန်ရှိသင်၏စီးပွားရေးကိုအာရုံစိုက်နိုင်သည်။
လန်ဒန်မြို့တွင်လည်ပတ်ငွေကြေးအရင်းအနှီး၊ လန်ဒန်တွင်အကြံပေးခြင်း၊ လန်ဒန်ရှိပစ္စည်းကိရိယာငွေကြေး၊ လန်ဒန်ရှိငွေကြေး ၀ န်ဆောင်မှုလိုင်စင်စသည်တို့ကိုလှည့်ပါ။
လန်ဒန်တွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ခြင်းသို့မဟုတ်လန်ဒန်ရှိထူထောင်ထားသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု၏ပိုင်ရှင်ဖြစ်လျှင်အကူအညီလိုလျှင် ဘဏ္licensာရေးလိုင်စင် အဘို့အလန်ဒန်ကနေ အီးယူသို့မဟုတ်ကမ်းလွန်လိုင်စင် ဘို့ ဘဏ်လုပ်ငန်းလိုင်စင် လန်ဒန်မှ Crypto ဖလှယ်ခွင့်လိုင်စင် နှင့် ICO သို့မဟုတ် လောင်းကစားလိုင်စင် အမျိုးမျိုးသောတရားစီရင်မှုအတွက်လန်ဒန်ကနေ။
- လုပ်ငန်းလိုင်စင် လန်ဒန်ကနေ
- ကုန်သွယ်ခွင့်လိုင်စင် လန်ဒန်ကနေ
- ဘဏ်လုပ်ငန်းလိုင်စင် လန်ဒန်ကနေ
- Crypto Exchange လိုင်စင် လန်ဒန်ကနေ
- ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင် လန်ဒန်ကနေ
- လောင်းကစားလိုင်စင် လန်ဒန်ကနေ
- ငွေပေးချေမှုကြားခံ လန်ဒန်ကနေလိုင်စင်
လန်ဒန်မြို့တွင်အလုပ်လုပ်မြို့တော် = လန်ဒန်ရှိလက်ရှိပိုင်ဆိုင်မှုများ - လန်ဒန်ရှိလက်ရှိတာဝန်ဝတ္တရား
ဘို့ လည်ပတ်ငွေကြေး လန်ဒန်မှာငွေကြေး
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုဝယ်ယူ လန်ဒန်မှာလန်ဒန်မှာကြွေးရှင်တွေ၊ လန်ဒန်မှာအခွန်ပေးဆောင်ရမယ့်အခွန်အခတွေ၊ လန်ဒန်ရဲ့စျေးနှုန်းအရ ၀ ယ်ယူစျေးနှုန်းတွေမပါဘဲနဲ့လန်ဒန်မှာ၊ အကြံပြုသည်မဟုတ်။ ဘို့ လန်ဒန်ရှိစီးပွားရေးအတိုင်ပင်ခံ London တွင် Due Diligence နှင့်ဆက်စပ်သောသင်လုပ်နိုင်သည်
ပစ္စည်းကိရိယာငွေကြေး London တွင်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသစ်အတွက် London ကိုပစ္စည်းအသစ်များအတွက် ၁၀၀% ငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးသည်
လန်ဒန်ရှိပစ္စည်းကိရိယာငွေကြေးအတွက် - ပိုသိကြ ဆက်သွယ်ရန်
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလှည့်ကျအတိုင်ပင်ခံ London တွင်အမြတ်တိုးရန်၊ ကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချရန်လန်ဒန်ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကိုပြောင်းလဲရန်ကူညီရန်၊ တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင် ငွေသားစီးဆင်းမှုစသည်တို့လန်ဒန်ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုအသုံးပြုသည် န်ဆောင်မှုများလှည့် စီးပွားရေးတိုးတက်အောင်လန်ဒန်မှာ။
London မှဖောက်သည်များအားအိုင်တီ ၀ န်ဆောင်မှုများပေးသည်။ web development လန်ဒန်မှာ, eCommerce ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လန်ဒန်မှာ, blockchain ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ လန်ဒန်မှာ, software development လန်ဒန်မှာ, မိုဘိုင်း app ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လန်ဒန်မှာလည်းလူသိများ မိုဘိုင်း application ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လန်ဒန်မှာ, ဝဘ်ဒီဇိုင်း လန်ဒန်မှာ၊ လန်ဒန်မှာဒီဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး
ငါတို့သည်လည်းအခမဲ့ပေး: လန်ဒန်ရှိဆော့ဖ်ဝဲလ်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှု၊ လန်ဒန်ရှိဝက်ဘ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာတိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှု၊
London ရှိစျေးနှုန်းချိုသာသော Web Designing Company
လန်ဒန်ရှိဝဘ်ဒီဇိုင်းကုမ္ပဏီ London ရှိ Client`s အတွက်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ပေးသည်မှာ Corporate, Responsive နှင့် SEO Optimized ဖြစ်သည်
London ရှိစျေးနှုန်းချိုသာသော Web Development
လန်ဒန်ရှိ Web Development Company နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အရည်အသွေး၏။
London ရှိစျေးနှုန်းချိုသာသော App Development
351+ ကျော်သောအက်ပ်များ နိုင်ငံတကာဖောက်သည်များအတွက်။ လန်ဒန်ရှိ App Development ကုမ္ပဏီ.
London ရှိသင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်ထုတ်ကုန်များ - သင်၏အွန်လိုင်းတိုးတက်မှုနှင့်လန်ဒန်နှင့်နိုင်ငံတကာတွင် ဦး ဆောင်မှုမျိုးဆက်အတွက်။
London ရှိတတ်နိုင်သည့် Software Development
လန်ဒန်ရှိ Software Development ကုမ္ပဏီ ဖွံ့ဖြိုးမှု, စမ်းသပ်ခြင်းနှင့် devOps များအတွက်တိုင်ပင်။
London ရှိစျေးနှုန်းချိုသာသော Block Chain Development
စိတ်ကြိုက် လန်ဒန်မြို့ရှိ Blockchain ဖွံ့ဖြိုးရေးကုမ္ပဏီ, မသက်ဆိုင်ဘဲမူလသင့်ရဲ့စက်မှုလုပ်ငန်း။
London ရှိအိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းနှင့် London ရှိအိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်များ
လန်ဒန်တွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင်ခြင်းသို့မဟုတ်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုလန်ဒန်တွင်တိုးချဲ့ခြင်း၊ သင်သည်လန်ဒန်မြို့တွင်ရုံးခန်းတစ်လုံးသို့မဟုတ်အိမ်တစ်လုံးငှားရမ်းနိုင်သည်။ လန်ဒန်ရှိအိမ်ခြံမြေပိုင်ရှင်များနှင့်လန်ဒန်ရှိအိမ်ခြံမြေပွဲစားများနှင့်ဆက်သွယ်ပါ။
လန်ဒန်မြို့ရှိအိမ်ခြံမြေတစ်ခုကိုဝယ်ယူရောင်းချခြင်း။ ငါတို့ကြိုးစားကြည့်ပါ အခမဲ့အိမ်ခြံမြေပေါ်တယ် လန်ဒန်မှာ။ လန်ဒန်မြို့တွင်ရောင်းရန်ရှိသောတိုက်ခန်း
လန်ဒန်မှာတိုက်ခန်းငှားချင်တယ်။ အခမဲ့အိမ်ခြံမြေပေါ်တယ် လန်ဒန်မှာ။ လန်ဒန်မြို့တွင်တိုက်ခန်းငှားရန်။
လန်ဒန်ရှိလယ်ယာမြေများကိုရှာဖွေခြင်း၊ နောက်ထပ်မရှာပါနှင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏လန်ဒန်ရှိအခမဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုစာရင်းများကိုအသုံးပြုပါ။
လန်ဒန်သည်ကြီးကျယ်ခမ်းနားသောတိုင်းပြည်တစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော်သင်လန်ဒန်တွင်သင်လိုချင်သောအရာသည်ရှာဖွေရန်ခက်ခဲနိုင်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ဝန်ဆောင်မှုများကိုလန်ဒန်မြို့တွင်သုံးပါ။ သင်လိုချင်သမျှ၊ သင်လိုချင်တာ!
လန်ဒန်မြို့ရှိ Classified န်ဆောင်မှုများ
လန်ဒန်များအတွက် Classified Portal ကို
လန်ဒန်မှာလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ပါ၊ သို့မဟုတ်လန်ဒန်မှာသင်၏လုပ်ငန်းကိုတိုးချဲ့ပါ၊ သင်လန်ဒန်မှာရုံးသုံးပရိဘောဂများ၊ လန်ဒန်ရှိလက်ပ်တော့များ၊ လန်ဒန်ရှိသင့်တိုက်ခန်းအတွက်ပရိဘောဂများလိုအပ်နိုင်သည်။ နှင့်နိုင်ငံပေါင်း 105 ။
လန်ဒန်မြို့အတွက်အခမဲ့ Classified န်ဆောင်မှုများ
သင်၏စီးပွားရေးအသစ်အတွက်လန်ဒန်တွင် ၀ ယ်ယူရန်အိုင်တီပစ္စည်းကိရိယာများကိုရှာဖွေခြင်း။
လန်ဒန်ရှိကော်ဖီဖျော်စက်၊ မိုက်ကရိုဝေ့ဗ် Owen စသည်တို့ကဲ့သို့လန်ဒန်ရှိအိမ်တွင်းသုံးပစ္စည်းများ
Legal အတွက် London ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ Immigration Law ကိုဆက်သွယ်ပါ ယူကေတွင်နေထိုင်ခွင့် .
မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ - London ရှိ Virtual Office
ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့်စီးပွားရေးနာမည်နှစ်ခုလုံးရှိစာတိုက်နှင့်စာတိုက်များကို London ရှိ Virtual Office Address London ၌ရရှိနိုင်ပါသလား။
ဟုတ်ကဲ့သင်လုပ်နိုင်သည် - သင်၏အကောင့်ကိုကျွန်ုပ်တို့သတ်မှတ်ပြီးသည်နှင့်လန်ဒန် Virtual ရုံး၏အကောင့်အကောက်ခွန်ချိန်ညှိချက်များတွင်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့်စီးပွားရေးအမည်နှစ်ခုလုံးကိုထည့်သွင်းနိုင်သည်။ သို့မှသာစာနှစ်စောင်စလုံးကို Virtual Office Address ရှိအမည်များအောက်တွင်လက်ခံရရှိနိုင်သည်။ လန်ဒန်။
Virtual ရုံးလန်ဒန် Virtual Office UK
London Virtual Office Address သည်ကမ်းခြေရှိစာတိုက်ပုံးတစ်ခုလား။
ဖော်ပြခဲ့သောတည်နေရာအတွက်လန်ဒန်ရှိ Virtual ရုံး ၀ န်ဆောင်မှုသည်လန်ဒန်ရှိပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဖွဲ့မှစီမံခန့်ခွဲသောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတည်နေရာဖြစ်ပြီးသင်၏ဆက်သွယ်မှုနှင့်အထုပ်များကိုလန်ဒန်ရှိရုံးခန်းတည်နေရာတွင်လက်ခံခြင်းနှင့်စီစဉ်ခြင်း။
လန်ဒန်ရှိ Virtual ရုံးလိပ်စာ အင်္ဂလန်ရှိ Virtual ရုံးလိပ်စာ
လန်ဒန်ရှိ virtual office လိပ်စာများကိုလက်ခံရရှိထားသောစာတိုက်နှင့်စာတိုက်ပုံးများကိုလိပ်စာများစွာဆီပို့လို့ရသလား။
လန်ဒန်ရှိ Virtual လိပ်စာ | အင်္ဂလန်ရှိ Virtual Address
ကျွန်ုပ်၏လန်ဒန် Virtual Office လိပ်စာသို့ရောက်သောအခါကျွန်ုပ်၏စာပို့လျှင်ဘာဖြစ်မည်နည်း။
သင်၏စာသို့မဟုတ်အထုပ်ဖြစ်စေလန်ဒန်ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလိပ်စာသို့ရောက်သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်သူတို့သည်လန်ဒန်ရှိ virtual mailbox မှတစ်ဆင့်သင့်အားဒီဂျစ်တယ်ပြောင်းလဲပြီးသင်ထံသို့အကြောင်းကြားပြီးသင်ဖွင့်ရန်၊ စကင်လုပ်ရန်၊ ထုတ်ရန်သို့မဟုတ်စွန့်ပစ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအကြောင်းကြားရန်အကြောင်းကြားသည်။
လန်ဒန်ရှိ Virtual Business Address အင်္ဂလန်ရှိ Virtual Business Address
လန်ဒန်ရှိ Virtual Business လိပ်စာသည်ဗြိတိန်တွင်ရှိနေလိုသောမည်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုမဆိုသွားရန်ကောင်းသည်။ သင်၏တည်ရှိမှုအတွက်လန်ဒန်ရှိသင်၏ကိုယ်ပိုင်ရုံးခန်းဖွင့်လှစ်ရန်အတွက်အချိန်နှင့်ငွေအမြောက်အများကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်မလိုဘဲသင်၏စီးပွားရေးကိုလန်ဒန်တွင်တိုးချဲ့ရန်သင့်ဆန္ဒအပေါ်တွင်မူတည်သည်။
လန်ဒန်ရှိ Virtual ရုံးခန်း ဗြိတိန်ရှိ Virtual ရုံးခန်း
လန်ဒန်ရှိ virtual PO box အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ လန်ဒန်ရှိ virtual mail လိပ်စာသို့မဟုတ်လန်ဒန်ရှိ virtual office works များအတွက်အပိုနှင့်အပိုဆောင်းကုန်ကျစရိတ်တွေကဘာတွေလဲ။
UK တွင် virtual mailing address သို့မဟုတ် UK ရှိ virtual PO box သို့မဟုတ် UK ရှိ virtual office works တို့၏ဖော်ပြချက်အရကျွန်ုပ်တို့တွင်အလွန်ပွင့်လင်းမြင်သာသောမူဝါဒနှင့်လစဉ်အခကြေးငွေရှိသည်။ ၎င်းကိုနည်းပညာအားဖြင့် UK တွင် virtual office ဟုခေါ်ပြီးသင်ရွေးချယ်သော ၀ န်ဆောင်မှုများပေါ်တွင်မူတည်သည်။ စံအထုပ်၏အစိတ်အပိုင်းမဟုတ်သောအပိုဝန်ဆောင်မှုများကိုမရွေးချယ်မီအခြေအနေနှင့်ကုန်ကျစရိတ်များကိုအမြဲတမ်းအသိပေးပါ။
လန်ဒန်မြို့အတွက် Virtual Office Workspace | လန်ဒန်မြို့အတွက် Virtual စာတိုက်လိပ်စာ လန်ဒန်အတွက် Virtual PO box
ယူကေရှိ virtual ရုံး ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်အခြားအမည်များကဘာတွေလဲ။
ယူကေရှိ virtual ရုံး ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်လူတို့နှင့်ဆက်စပ်သောအခြားအမည်များမှာဗြိတိန်ရှိ virtual ရုံးများနှင့်စီးပွားရေးလိပ်စာများ၊ ယူကေရှိ virtual ရုံး ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ယူကေရှိဒစ်ဂျစ်တယ် Workspace ဖြေရှင်းချက်များ၊ ယူကေရှိ virtual ရုံးလိပ်စာ ၀ န်ဆောင်မှု၊ ယူကေရှိ ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ယူကေရှိ virtual လိပ်စာ ၀ န်ဆောင်မှု၊ ယူကေရှိ virtual ရုံး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများ၊ ယူကေရှိဒစ်ဂျစ်တယ်လုပ်ငန်းခွင် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ လန်ဒန်ရှိ virtual ရုံးကုမ္ပဏီ၊ ယူကေရှိ virtual စာတိုက်ပုံးဝန်ဆောင်မှုများ၊ လန်ဒန်ရှိ virtual ရုံးကုမ္ပဏီများ၊ ဗြိတိန်ရှိငှားရမ်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု၊ လန်ဒန်ရှိစာပို့ခြင်းဝန်ဆောင်မှု၊ ယူကေရှိ virtual mailbox ၀ န်ဆောင်မှု၊ ဗြိတိန်ရှိ virtual PO Box ဝန်ဆောင်မှု၊ ယူကေရှိရုံးခန်းငှားရမ်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု၊ လန်ဒန်ရှိစာတိုက်လိပ်စာဝန်ဆောင်မှု။
ဗြိတိန်နိုင်ငံအပါအ ၀ င်နိုင်ငံတိုင်းသည်လန်ဒန်သို့မဟုတ်အခြားတိုင်းပြည်များတွင်မှတ်ပုံတင်ရုံးလိပ်စာအဖြစ် virtual office ကိုအသုံးပြုရန်တင်းကျပ်သောစည်းမျဉ်းများရှိသည်။ ရှင်းလင်းချက်များအတွက်ထိတွေ့ရယူပါ။
လန်ဒန်ရှိ Virtual စာတိုက်လိပ်စာ လန်ဒန်ရှိ Virtual ရုံးစာတိုက်လိပ်စာ လန်ဒန်မြို့ရှိစာပို့ခြင်း လန်ဒန်မှာရှိတဲ့ရုံးခန်းလိပ်စာ
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လမ်းညွှန် နှင့် ထောက်ပံ့ လန်ဒန်ကို
လန်ဒန်ရှိ Startup များအတွက်အထူးပံ့ပိုးမှု
London ရှိ One Stop Shop
London ရှိ Client Acquisition ပံ့ပိုးမှု
ငါ Londonm သတင်းကို millionmakers.com နှင့်ဆက်သွယ်ရယူသင့်ပါသလား။
ဘို့ နောက်ဆုံးပေါ်လန်ဒန်စီးပွားရေးသတင်း လန်ဒန်, လန်ဒန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဥပဒေများစတင်ဘို့ စီးပွားရေးသတင်း, စီးပွားရေးသတင်းလန်ဒန်, နောက်ဆုံးပေါ်လန်ဒန်စီးပွားရေးသတင်း လန်ဒန်, လန်ဒန်မှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင်ရန် စီးပွားရေးဥပဒေ, လန်ဒန် စီးပွားရေးဥပဒေများ, စီးပွားရေးဥပဒေ လန်ဒန်, စီးပွားရေးဥပဒေများ လန်ဒန်, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစိတ်ကူးများ လန်ဒန်, စီးပွားရေးအတွေးအခေါ်အသစ်များ လန်ဒန်, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစိတ်ကူး London၊ စီးပွားရေးအတွေးအခေါ်အသစ် London, London စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစိတ်ကူးများလန်ဒန် နောက်ဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာဥပဒေများ, နောက်ဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာဥပဒေများ လန်ဒန်, လန်ဒန်စီးပွားရေးဥပဒေသစ် နောက်ဆုံးသတင်းများ, လန်ဒန်မြို့ရှိနောက်ဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများအသစ်ပြောင်း, လန်ဒန်နောက်ဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစည်းမျဉ်းများ, နောက်ဆုံးပေါ်စီးပွားရေးစည်းမျဉ်းများလန်ဒန်, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသစ်လန်ဒန်အသစ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစည်းမျဉ်း လန်ဒန်, လန်ဒန်စီးပွားရေးဖွဲ့စည်းပုံ, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသစ်လန်ဒန်လန်ဒန်၊ လန်ဒန်၊ စီးပွားရေးဆောင်းပါးစီးပွားရေးအကြံဥာဏ်လန်ဒန်၊ စတင်တည်ထောင်သည် လန်ဒန်, စီးပွားရေးအတွေးအခေါ်သစ် ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့, လန်ဒန် စီးပွားရေးသတင်း, စီးပွားရေးသတင်း လန်ဒန်, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆောင်းပါးများ လန်ဒန်, လန်ဒန်စီးပွားရေးဆောင်းပါးများ, လန်ဒန်စီးပွားရေးသတင်းယနေ့, လန်ဒန် စီးပွားရေးဆိုင်ရာမွမ်းမံမှုများ, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလန်ဒန် update လုပ်လန်ဒန် စတင်တည်ထောင်သည်, လန်ဒန်သတင်း၌စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ရန်, လန်ဒန်သတင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင်ရန်, လန်ဒန်သတင်းငယ်၌စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ရန်မည်သို့မည်ပုံ, စတင်ရန်အကောင်းဆုံးစီးပွားရေး လန်ဒန် update ကို, စီးပွားရေးအစီအစဉ် လန်ဒန်သတင်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအခွင့်အလမ်း London အတွက်နောက်ဆုံးသတင်းများ, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအခွင့်အလမ်း လန်ဒန်မှာ အသေးစားစီးပွားရေး လန်ဒန်၊ စီးပွားရေးသတင်း လန်ဒန်, စီးပွားရေးဝဘ်ဆိုက် လန်ဒန်, စီးပွားရေးလုပ်ငန်း လန်ဒန်မှာ, စီးပွားရေးလုပ်ငန်း လန်ဒန်, လန်ဒန်စီးပွားရေး, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ London, London စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ။